ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » ဖေဖေါ်ဝါရီလ
ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်ယနေ့ဒီမှာမှောင်မိုက်ကိုခံစားနေတဲ့ငါသိ၏။ တံခါးကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုအဖြေလည်းမရှိသောကွောငျ့အကြှနျုပျနှလုံး၌ငါကျနော်တို့ရှုံးရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါသိ၏။ ဒီစနစ်န်းကျင်တစ်လမ်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သည်းခံခြင်းနှင့်ကတိကဝတ်တစ်ခုစမ်းသပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းကြီးမြတ်စိတ်ကူးတစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ "- ဒွန် Draper" ရူးသွပ်လူတို့, "2007-2015, AMC ...
အနာဂတ်မီဒီယာ Concepts - 2018 NAB ပြရန်, Pre-Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @FMCTraining
အနာဂတ်မီဒီယာ Concepts ၏ဘင် Kozuch NAB Show မှာအဆိုပါ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလားညီလာခံ၏သမိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Caringo ၏ Adrian Hererra သည်သူ၏လာမည့် 2018 NAB Show ကိုလှည့်ပတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် Caringo အားလုံးအကြောင်းပါမျှဝေ!
LiftIgniter - 2018 NAB ပြရန်, Pre-Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @LiftIgniter
LiftIgniter ၏အာဒံကို Spector အဆိုပါ 2018 NAB ပြရန်ပရိသတ်ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏နည်းပညာမျှဝေနှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အဘယ်အရာကရှင်းပြသည်
စက်မှုဒီဇိုင်နာ - Entry အဆင့်အထိ
ရာထူး: စက်မှုဒီဇိုင်နာ - Entry အဆင့်အထိကုမ္ပဏီ: တောင်ပိုင်း Telecom ကုမ္ပဏီတည်နေရာ: ဘရွတ်ကလင်းနယူးယော့အမေရိကန် 3D အဆိုတော်တောင်ပိုင်းတယ်လီကွန်း, keyshot အပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ 3D အနုပညာရှင်ရှာဖွေနေ solidworks အတွက်မော်ဒယ်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ Photoshop နဲ့ Illustrator အပေါ်ကျွမ်းကျင်မှုနေပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်နေသည်။ သူ / သူမထုတ်ကုန်အသစ်လိုင်းများအဘို့ပါဝါပွိုင့်တင်ဆက်မှုအောင်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပဓာနကျသောအသုံးဝင်မှု: ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ 3D ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်များ, ပြန်ဆို, ထုတ်လုပ်မည် ...
ယနေ့ Access ကိုစိန့် Tammany, Louisiana ရဲ့စိန့် Tammany ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ််ထမ်းဆောင်အစိုးရကလက်လှမ်းရုပ်သံလိုင်းသုံးခု JVC KY-PZ100 စက်ရုပ် PTZ ကွန်ယက်ကိုဗီဒီယိုကထုတ်လုပ်မှုကင်မရာများနှင့်တစ်ဦး RM-LP100 ဝေးလံခေါင်သီကင်မရာ controller ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် JVC Professional ကဗီဒီယို, JVCKENWOOD အမေရိကန်နိုင်ငံကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနခွဲ, ယင်း၏ကောင်စီအခန်းများရန်။ နောက်ဆုံးကျဆုံး installed, စနစ်ပုဂ္ဂိုလ်များကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်အစည်းအဝေးလွှမ်းခြုံတိုးတက်ခဲ့သည်။ "ဒါဟာခဲ့ ...
ဆုရရုပ်ရှင် ioGates နှင့်အတူ '' အဆိုပါရင်ပြင် '' အစုရှယ်ယာနေ့စဉ်လုံလုံခြုံခြုံ
ထုတ်လွှင့် Pix ™ယနေ့အများအပြားသည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းဆုနှင့်အတူတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားရေးဘာသာစကားများရုပ်ရှင်ပွဲတော်အော်စကာအမည်စာရင်းတင်သွင်းခံသောအဆိုပါရင်ပြင်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တည်းဖြတ်ခွင့်ပြုချက်အဘို့အလုံလုံခြုံခြုံနေ့စဉ်သတင်းစာများကိုမျှဝေဖို့ ioGates cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု '' Magnolia ရုပ်ပုံများကြေညာခဲ့သည်။ "ioGates အပေါ်လူတိုင်းကလုပ်နဲ့ off အများအပြားပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ပစ္စည်းရယူ ထား. , ကမပါဘဲကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ ...
1 ၏စာမျက်နှာ 8612345 » 102030...နောက်ဆုံး»